Imidlalo yaMva nje ye-Android ESIMAHLA-uKhupha, uPhononongo, amaqhinga | I-Androidsis
Ngenye yezona zinto sizisebenzisa kakhulu, ubuhle be-Smartphones kunye neethebhulethi zethu, kunye neeprosesa zazo ezininzi ezine-GPUS ekumgangatho ophezulu ezingenanto yakwenza nomona. eyona midlalo iphathekayo yomdlalo wevidiyo namhlanje, kukonwabela okukhulu Imidlalo eyahlukeneyo enikelwe kuthi kwivenkile yesicelo se-Android, i Play Store o Google Play isuka kuGoogle.
Kanye apha I-Androidsis Uyakwazi ukufumana ezona ngcebiso zibalaseleyo kwimidlalo ye-Android yakutshanje kunye nabathengisi kunye neeklasikhi ezingafiyo.
Kweli candelo le Imidlalo ye-Android Uyonwabele yonke into eyahlukileyo esiyifumana kwivenkile kaGoogle. Imidlalo yeArcade neMidlalo, amaQonga, iiAdventures, abaDubuli, imidlalo yokuqina kwengqondo, imidlalo yokuqhuba okanye eyona midlalo ilungileyo yokugcina incinci endlwini bonwabile. Kukho ulwazi malunga nemidlalo yasentsomini efana neMinecraft PE, iCrossy Road, iSky, iCandy Crush, iClash of Clans, iHay Day, iSurfers yangaphantsi, izityalo vs iZombies 2, Agar.io kunye neeNyoni eziNomsindo.
Ezona nkampani zomdlalo wevidiyo zibalaseleyo namhlanje zihlanganiselwe wena kweli candelo lingakholelekiyo Imidlalo ye-Android; Eyona nto ibalaseleyo kwiCapcom, EA Mobile, Ubisoft, Gameloft, Cartoon Noetwork, iDisney kunye neSega ukubala ezinye zeemveliso ezinkulu ezinikezelwe ekudaleni imidlalo ye-Android.
Latest Android imidlalo
Ke ngoku uyazi, zenze ukhululeke kwaye uyonwabele yonke ikhathalogu enkulu yemidlalo ye-Android esikunikela simahla ngokupheleleyo kwi-Androidsis.
Iikhowudi zePokémon GO onokuzisebenzisa ngoku
por UEder Ferreno yenzayo Iiveki ze2 .
IPokémon GO ngumdlalo othi ngamanye amaxesha usinike iikhowudi zokuthengisa, into enomdla ngokucacileyo…
Indlela yokufumana ilali eMinecraft: zonke iindlela
por UEder Ferreno yenzayo Iiveki ze3 .
KwiMinecraft kukho iintlobo ezahlukeneyo zeendawo ezihlala abantu, kodwa iilali ezinokuthi zibaluleke kakhulu. Bangumthombo we...
Iidekhi ezingcono zoClash Royale Double Elixir umngeni
por UNerea Pereira yenzayo Iiveki ze4 .
UClash Royale uququzelela umsitho obizwa ngokuba yi-Double Elixir Challenge ehlala iveki kwaye…
Ke unokongeza iileta ezinemibala kunye neesimboli kwiprofayile yakho yoMlilo wasimahla
Namhlanje uMlilo wasimahla ngomnye wemidlalo efumene uhlaziyo oluninzi kwaye ngenxa yesi sizathu iphumelele…
Uyitshintsha njani indawo kwiGarena Free Fire
por UNerea Pereira yenzayo Inyanga e-1 .
IGarena yasimahla yoMlilo ngumdlalo owaziwayo kwinqanaba lehlabathi, nangona kunjalo xa kuziwa ekudlaleni akukho ...
Uyitshintsha njani i-imeyile yeakhawunti yeSupercell
Ukutshintsha i-imeyile ye-akhawunti ye-Supercell kuya kusivumela ukuba sisebenzise enye i-akhawunti ukugcina inkqubela kunye nokuthenga...
Eyona midlalo ilungileyo yeGumbi lokubaleka ye-Android
Nantsi eyona midlalo isi-7 yegumbi lokubaleka onokuthi uyifumane kuDlalo lukaGoogle lwezixhobo zakho…
Eyona midlalo idumileyo kuGoogle Play Store
por UAron Rivas yenzayo Iinyanga ze2 .
I-Android inokhetho olubanzi lwemidlalo yazo zonke iintlobo, kwaye kungenxa ye-Google Play Store. Kwi...
I-Clash Royale ine-clone yaseTshayina kwaye ibizwa ngokuba yi-Master Royale: konke malunga ne-mod
Izigidi zabantu ziyazi uClash Royale, umdlalo owasungulwa nguSupercell kwaye amanani abo awuxhasayo ...
Eyona midlalo ilungileyo yokukhathalela abantwana ye-Android
por UIsake yenzayo Iinyanga ze2 .
Ukunyamekela usana kuyimbopheleleko enkulu. Kodwa ukuba ufuna ukuzama ukwenza ngaphandle kokuba nomntwana ...
Uyenza njani imbiza yeentyatyambo kwiMinecraft
KwiMinecraft unokuthembela kwizinto ezininzi, uninzi lwazo lunokwakhiwa ukuze uzifumane. Kwisihloko se...
Amaqhinga ama-5 ohlaziyo olutsha lwe-PUBG yohlaziyo lweselfowuni ongaluthathelanga ngqalelo
Eyona midlalo ilungileyo yePokémon ye-Android
Eyona midlalo ilungileyo yokwakha ye-Android
Eyona midlalo yechess ilungileyo kwi-Android
Eyona midlalo ilungileyo yokulima ye-Android
Eyona midlalo ilungileyo ye-baseball ye-Android
Elona phepha lilungileyo lokukhuphela imidlalo ye-NES
Ezona mpawu zibalaseleyo ze-PSP ze-Android
Iimpawu ze-5 ze-Nintendo DS ze-Android
Jonga umdlalo we-blue whale !!
I-Chicken Scream, umdlalo wenkukhu olawulwa ngelizwi lakho kwaye uyayibetha kwi-Android
Eyona midlalo yokusinda ye-Android
Ukusinda komhla R, uhlalutyo lokusinda okungcono kwe-Android
Eyona Pokemon Go lomnqweno yimfumba ngaphandle Ingcambu, Android Marshmallow ezikhethekileyo
Uyivula njani yonke imfihlelo kunye nemfihlo yabalinganiswa beDisney Crossy Road